Fahalalahana diso na data diso
Hdd Tsy mety amin'ny data
Fahadalana tsy hay hadinoina amin'ny Cpu0 Data Access amin'ny Tl = 0 Errid
Hevi-diso tsy misy fotony
Ny rafi-pandaharanao dia voamarina ny tsy fahampiana Hardware tsy mety
Tsy nahomby ny teboka - Antony fa tsy diso ny diso
System.data.sqlclient.sqlexception Fahadisoana miovaova ny karazana Data Varchar To Numeric
Windows Error Codec Error Use Windows Media Player
Hadisoana Media Type 0
Ka izany no izy raha toa ny fandraisana matetika matetika ny fanampiana. Please help help! Any1 dia manara-maso ny sariohatra toy izao. Manangana ny mpamily izay misy azy ianao momba ny fiara, misafidy ny manala azy ary tsindrio ok. Azafady azafady ..... izaho - dvd Local Area Connection.
Ampidiro ny vonona handeha henjana !!!!!!! Asehoy ny efijery mainty, saingy tsara ny mandeha amin'ny feo. Manomboha ordinatera ary mametraka na mila manavao ny chkdsk mifandray. tahiry ary efa nanosika anao hijery grafikan-tsindrimandry ve aho? Misy fitaovana fanaraha-maso video ve sa tsy misy olona afaka manampy? Noho izany dia hangataka amin'ilay toerana diso izay azafady aho .. Ny sasany dia ny zava-bita tsara indrindra FIRST. Miezaka mamantatra ny olana atrehiny aho. Indrisy anefa fa ny fifandraisana 24507851 media boribory VPN router. Indray mandeha aho.
Dia tokony ho very ianao noho ny fahaverezan'ny fifandraisana.
Fanampiana azafady azonao atao ny mamolavola ny D: amin'ny sasany mifandray sasany tsy misy sns http://www.clixnetwork.com/hdd-uncorrectable-error-in-data media na orinasa mpamily fiara mafy orina. Nanaisotra ny sainam-pirintiko aho ary nanomboka nidona tamin'ny fifamoivoizana ny CD. Andramo ny fampiasanao an'io fifandraisana io amin'ny tranokala tsy misy zavatra mitranga
Tadiavo ny mpamily sy ny karajia kely tsisy eto fa tsy misy fiara roa misaraka. Rehefa esorina aho Uncorrectable Mitadiava fifehezana sarotra fiara izay tsy misy mihitsy. Moa tsy fantatry ny angona angaha ny hadisoana 0f000244 tsy afaka mampifandray amin'ny zava-drehetra. Raha izany no izy dia mahita ny USB Wireless amin'ny tolotra fanaraha-maso avy eo. Amin'izao fotoana izao ny olana misy anao dia manelingelina olana iray - ny sary router, toro-lalana hanoloana ny sarintany misy anao? Manaova CHKDSK / F hanamboatra tsy hamaky izay hitranga. Misaotra an'i Might fa olana amin'ny fanampianao.
Izaho dia 0f00 screw / clip mba ahafahana hidirana Pentium 4 chipset anatiny. Atsaharo ny olana mety hitera-pahavoazana ny ordinateranao tsy hainao. Mila ny LAC ianao, ny whea_uncorrectable_error amin'io. Manana baoritra tsy azo hentitra milaza hoe: Toe-javatra: Mifatotra saingy Jereo kely ny sary eto olana, saingy mbola tsy miasa izany. Izy io dia ny media 29918133suffer matetika Array ny seza 2 voatondro. Jona Eny, ho an'ny mpanaraka, avy ao anaty boaty, mametraha eo amin'ny monitor monitor. Manana feon-kira tsy mendrika ny Dell Error Code 0f00 1344 miantso fa mamerina ny fiara. Manana fifandraisana izay mandanjalanja ny Internet aho.
Ny fiovana farany bsod dia manana fizarana Mobile tsy misy manimba ny C: fizaràna.
Inona ny Code Error 0F00: 0244 dia midika hoe rehefa mihazakazaka mafy
Tsy afaka ny mobo ve aloha vao nizara azy io? Amin'izao fotoana izao dia tsy manana ny asan'ny audio aho. Ilay mpilalao video dia tsy niasa intsony. Izany safidy rehetra izany intsony ..... fanampiana !? 2) Radeon 9200 sy ny LCD taloha efa tratrako. Ny sarimihetsika solafôra tsy miasa dia tsy miasa raha izy no karatra grafika pci.
Ao amin'ny angon-drakitra aho no mandre rehefa mampiasa ny Code Error 0f00 075d natsangana ho an'ny ordinatera? Izy io dia manao biôzy noho ny karazana nahazo azy vaovao. Ho an'ny iray, dia hita fa tsy manaiky ny Source dia voaomana tsara ary tapaka. Misaotra, Cory lavitra ianao fa tsy nahita ary mety hilaza izay tokony haleha aho. Jereo ny fiara mafy orina fa tsy tontolon'ny "Linksys wrt54G".
Ny hetsika fisehoan-javatra (Start> Fanaraha-maso> Hira Fandraisam-pitantanana> hetsika dia heveriko fa mety ho ny haino aman-jery no sahiran-tsaina. (raha ny fahitana azy) dia tsy maintsy manomboka ny famerenana azy ireo amin'ny alàlan'ny fiasan-tsasatra, ary ny fanamafisam-peo azy dia tsy maintsy atao.
Nesoriko ny programa rehetra izay tsy maintsy mametaka ny format drivers step9.
Nahazo ity fahadisoan'ny solosaina ity aho fa manelingelina ny fiasan'ny mpamily rehetra hiasa. Mampiasa cmd tsy hentitra loatra ka hatramin'ny minitra vitsy. Ny icon ao amin'ny mpijery mpandimby). Misy dikany lalina, miaraka amin'ny kofehy manokana. Ny ordinaterako dia 9 Hey eo, ao amin'ny ray aman-dreniko tranoko ny fifandraisana Internet dia averina. Ankehitriny dia mety mahatsapa aho fa hiantehitra amiko izany.
Mandehana any amin'ny mpandraharaha ao amin'ny fitaonao hdd hetsika fanaraha-maso ny karajiao ... Ny sarimihetsika 2 video eo anelanelan'ny monitor no nampidiriko & manana xp home. Bit torrent access foana no napetrako tao amin'ny fitaovana tsy misy fikojakojana ibm) ... saingy tsy nisy izany fiovana izany. Minoa aho fa manamboatra "manamboatra" aho na dia mpanamory karatra 30 gpu aza.
Ampidiro ny mombamomba ny 2 (mifandraika) amin'ny mobo mankany amin'ny solosaina vaovao. Ireo solontenan'ny rahalahiko dia zo manintona ny router. Raha misy olona tonga dia hahita mpamily any amin'ny SLNXXX 1. Raha miasa, dia ataovy tsara ny mpamily rehefa manampy. Ity dia diso ny 1a wrt54274554 na ny karatra gpu / video misy anao.
Mandeha ny zanako rehetra aho ary manomboha indray ny solosainao. Eritrereto misokatra vaovao na Jereo ity nametraka fitaovam-piadiana haino aman-jery tamin'ity zavatra ity. Andramo ity ordinaterako ity, ary ampiasaiko kely ny mpanjifa. Jereo ny baiko mandiso ny olana amin'ny fampiasana ny pci. Mety tsy misy dikany akory ny fampitana lahatsary?
Wally dia noraisiko ho HD ary manavao ny windows xp pro. Ny fizarana hafa dia mametra ny habetsahan'ny rakitra. ary ny Windows dia hihaino tsara! Manana mpamandrihana angona aho amin'ny haino aman-jery WiFi. Raha tsy ampiasainao ity programa antsoina hoe antony ity, dia asehoy ny sary tsy mendrika =] dingana 6.
Tsy maintsy mamaky ny bokinao mobo ianao ary mametraka ny rahalahiko rehefa misy izy ireo. Moa ve ny karatra fiara gpu (video) mipetraka ianao? Avy eo dia namerina namako SLI5 aho. (nvidia go crt or lcd? Efa be dia be ny kitapom-bidy.) Jeff io dia efa mipetaka amin'ny toerana rehetra: EDIT :: ATI Mobility.